किन राख्न थाले घरघरमा अक्सिजनको सिलिन्डर ? -
किन राख्न थाले घरघरमा अक्सिजनको सिलिन्डर ?
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १४:०४
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले नयाँरुप लिन सफल भएता पनि कोभिड (१९) दोस्रो लहरको समाधानमा नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । जोड घटाउको राजनीतिकै कारण कोभिड समस्याको समाधानका लागि भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको धेरै जानकारहरु बुझाई छ ।
लकडाउन नै समस्याको समाधान हो भन्न नमिल्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । पहिलो कोरोना लहरमा नेपालमा खासै समस्या नदेखिएता पनि दोस्रो लहरको कोरोनाले नेपाली जनतालाई पुर्णरुपमा त्रासमा राखिरहेका छन् । हरेक अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेका छन् भने अक्सिजन अभावकै कारणले धेरैको मृत्यु हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । अक्सिजको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि समस्याको मुल विषय वस्तु भएको छ भने हरेक नागरिकहरुले अब घरघरमा अक्सिजनको सिलिन्डर राख्न थालेको समाचार बाहिरिएको छ । यही विषयमा अनलाइन खबरका पत्रकार नुनुता राई यसरी लेख्छन् ।
अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमणबाट सिकिस्त भएका बिरामीलाई अक्सिजनको शक्त आवश्यकता छ । अक्सिजन अनिवार्य दिनुपर्ने संक्रमित बिरामीको चाप बढेपछि अक्सिजनसहितको बेड पाउदा त झन् ‘चिठ्ठै’ परे जस्तो हुने अवस्था भएको छ ।
अहिले परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई संक्रमणको पुष्टि भयो कि अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गर्न थालेको पाइन्छ । काठमाडौंका महेश आचार्य ९परिवर्तित नाम० ले आफ्नो मामालाई अस्पताल पुर्‍याएर पनि अक्सिजनको अभावले बचाउन सकेनन् । अस्पताल पुग्ने बित्तिकै डाक्टरले विरामीलाई तत्काल अक्सिजन चाहिने तर अस्पतालमा नभएको कारण आफैं खोजेर ल्याउन भनेको थियो ।‘सरकारले आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न नसक्ने, अस्पतालहरूले पनि नसक्ने भएपछि नागरिक आफैं जोहो गर्न थालेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो सही त होइन । तर आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्वतयारी गर्नु गलत हो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा एक लाख १० हजार २६३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । करिब २० प्रतिशतलाई अक्सिजन सपोर्ट चाहिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुका प्रमुख डा। कृष्ण पौडेलको भनाइ छ ।